Tiri nyanzvi mugadziri uye nokutengesa kuti rwemichinjiko zvikamu uye imwe ekisipoti kambani pamwe nokuchengetedza, Kudzingwa, punching, chando Anoumba uye pamusoro kurapwa mutsetse-akadai inopisa Dip galvanization, zingi yakanamirwa pamifananidzo uye upfu unhani nezvimwewo .. .. Tave tichigadzira uye kwekurasira Scaffolding Kudzingwa, nokuchengetedza uye tsikwa nenhumbi zvigadzirwa Europe uye North America musika kweanopfuura makore makumi maviri. Tine nyanzvi uye ruzivo mainjiniya vanogona kupa gadzirisa zvigadzirwa sezvo paminiti vanodhirowa ...
Kukura Kukuru Castings
Big saizi castings: Yedu yakakura saizi yekurasa masisitiri inovhara nzvimbo ye60,000 mativi emamita uye chivakwa nzvimbo ye23,000 mativi emamita. Kune vashandi vanopfuura mazana matanhatu nemakumi matanhatu, kusanganisira mazana masere evashandi vehunyanzvi uye mazana mana nemakumi masere evashandi vehunyanzvi. Iyo kambani ikambani inoshanda mukuvandudza uye kugadzirwa kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvesimbi zvinopfeka zvinoda kuitwa nemaindasitiri akadai sekugadzira zvicherwa, simbi, simba, zvekuvakisa, nezvimwewo zvinhu zvekupfeka zvinoramba ...
Zvishongedzo zvikamu Isu (M&E) inyanzvi yekugadzira yesimbi yakarukwa & simbi yekushongedza zvikamu. pamwe nekumberi manejimendi uye zvinehunyanzvi musika-wakanangana nefilosofi inowana kusimudzira kwakanaka maererano nemhando yepamusoro zvigadzirwa uye mukurumbira wakanaka. M & E yekushongedza simbi uye simbi yekukanda kana zvigadzirwa zvekugadzira zvakagadzirwa zvemhando yepamusoro zvigadzirwa, zvinogadzirwa zvese neyechinyakare mushandi mashandiro uye nenzira yakarasika ye wax nzira iyo inogona kutipa chivimbo chekugadzira rakakura renji yepamusoro ...
Chigadzirwa Nhanganyaya M & E inotumira kunze pombi uye zvigadzirwa, coupling, pombi dzemvura uye drainage zvigadzirwa kweanopfuura makore makumi matatu. Hapana mapaipi eHub nekugadzika kunoitwa maererano neASMM A888 American standard, CSAB70 Canada standard uye EN877 European standard. hatina kunyoresa hapana hub hub uye fittings muIAMPO (ine UPC mucherechedzo) ye "MMCST" yekumaka uye muCSA ye "HB" yekumaka. Zvedu ZVINOGONESESWA Nemapaipi uye zvekuisira, isu tinopawo isina simbi yekubatanidza simbi mumhando dzakasiyana kubva pa1-1 / 2 "kusvika 10". stee ...
Hose kiramba uye Stainless simbi coupling: Iyo hosipaipi inosunga, simbi isina simbi isina-hub coupling uye gaskets ayo anoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri e auto oipeni pombi, mota pombi, dhizaini system. Iko kugona kwekugadzira kuri 1 miriyoni pazuva. Tine yakakwana yekugadzira mutsara: mafuru ekugadzirisa, zvigadzirwa zvigadzirwa, kurapwa kwepamusoro, rabha vulcanizing, uye kugadzirwa kwekupura. Zvatinoita Isu tiri vakavimbika vanopupurirwa OEM mutengesi wemakambani makuru emota anoshandira mijenya o ...
Brass / Nickel Bronze
Tine zvikwata zvina zvakabatanidzwa zvinosanganisira Aluminium, Mhangura, Brass & Nickel bronze castings -Our Foundries anonyanya kugadzira Aluminium, mhangura-yakavakirwa pombi zvigadzirwa, uye zvimwe zvakagadzirwa nemhangura, zvine goho regore rinosvika mazana mana ematani. -Iyo chigadzirwa uremu inogona kuve 0.05-100kg, iyo saizi yakakura i800 * 800. Zvinoenderana nezvinodiwa, izvo zvinhu zvinogona kusangana nezvinodiwa zvekuyedzwa neROHS, uye iko kwechokwadi kwekukanda zvigadzirwa kunogona kusvika CT7-CT8. With a spectrometer, zvinhu izvo zvinogona b ...
Zvigadzirwa zvedu zvinogadzirwa nemhando yepamusoro nekushandisa zvakavimbika zvinhu, tekinoroji nyowani, yepamusoro michina michina & zvakanyatso kuita maitiro kutonga. Seimwe kambani inotungamira mune chaiyo yekukanda munda, - isu tinogadzira nezvinhu zvinotevera: GB (CHINA), ASTM (US), DIN (GERMANY), JIS (JAPAN): 304.304l, 316,316l, 410, cf8.cf3, cf8m, 1.4301,1,4303.. A3 ...
Mota Kukanda zvikamu
Hebei Metals & Engineering Zvigadzirwa Kambani Ltd. yakavambwa muna 1974 uye yakagadzirwazve kubva kune yehurumende-bhizinesi kuenda kune yakazvimiririra bhizinesi muna 2005. Isu tiri piyona we castings ekisipota muHebei Province, China. Iine maviri-ane-zvachose mafurati uye ane akati wandei akabatanidzwa-akareba ekutsigira vadyidzani vanosangana nezvinodiwa zvevatengi vakasiyana pakugadzira castings (mune dzakasiyana zvinhu & castings maitiro), machining uye pamusoro pekupfeka nezvimwe …… NaChina Hurumende yezvakatipoteredza pr. ..
Iine maviri-ane-zvachose mafurati uye ane akati wandei akabatanidzwa-akareba-ekutsigira vadyidzani vanosangana nezvinodiwa zvevatengi vakasiyana pakugadzira castings (mune dzakasiyana zvinhu & castings maitiro), machining uye pamusoro pekupfeka nezvimwe …… NaChina Hurumende China dziviriro mutemo. , takaisa imwe mamiriyoni makumi maviri eRMB kusimudzira zvivakwa zvekutanga. Iine makore anopfuura makumi matatu ezvigadzirwa ekurasira ruzivo / mhando yepamusoro uye yakaoma technical QA timu / kukura pamwe nevatengi uye ...
Aluminium / Brass Storz Moto Hose Kubatanidza Uye Nozzle YeMoto Kurwisa Zvishandiso
Moto Hose Kamwene uye Kubatanidza Standard: ChiGerman \_ American \_ Russian \_ BS Chinyorwa Aluminium kana Brass Dhayamita (mm) DN50 DN65 Kushanda Pressure 1.6Mpa Inspecation Pressure 2.4MPa Inowanikwa Pakati Pakati Yakachena Mvura, Furo yakavhenganiswa Liquid Moto Hose Mabhomba Model Coupling Diamter Nozzle Diamter Rated jekiseni kumanikidza Kuyerera Range QZ3.5 / 5 DN50 (mm) 16mm 0.35Mpa 5L / S> 25m QZ3.5 / 7.5 DN65 (mm) 19mm 0.35Mpa 7.5L / S> 28m